Neymar Aabbihii oo daaha ka rogay shaqsiga lahaa go’aanka uu laacibka reer Brazil kaga tagay Barcelona – Gool FM
Neymar Aabbihii oo daaha ka rogay shaqsiga lahaa go’aanka uu laacibka reer Brazil kaga tagay Barcelona
(Paris) 16 Abril 2020. Magaca Neymar oo diiwaanka xiddigaha ay Barcelona dooneyso safka hore ku wehliya Laurtaro Martinez, iyadoo laacibka reer Brazil uu jecleysanayo ku soo laabashada Camp Nou saddex sano kaddib markii uu ka dhaqaaqay.
“Isaga ayaa mar walba doorta jidka uu qaadayo” ayuu yiri Neymar Sr oo iska difaacayay inuu ku hoggaamiyo wiilkiisa dariiqa mustaqbalkiisa.
“Waxaan mas’uuliyad iska saarnaa kaliya inuu helo qandaraaska ugu wanaagsan iyo inaan dajino guri iyo maareyn wanaagsan oo xirfaddiisa ah” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
Aabaha dhalay laacibkii hore ee Santos ayaa hoosta ka xarriiqay in go’aankii ay ku macsalaameeyeen Barca sanadkii 2017 uu lahaa Neymar Jr kaddib markii PSG ay bixisay qiimihii heshiiskiisa lagu jabniyay oo ahayd 222 milyan oo euro.
Si kastaba ha ahaatee, Neymar wali ma uusan noqon xiddigga ugu wanaagsan kubadda cagta sidii uu rajeynayay, balse hadda waxaa lagu soo warramayaa inuu doonayo ku soo laabashada kooxda Barcelona iyo inuu dib ula midoobo saaxiibkiis Lionel Messi.
Xubin cusub oo la wareegtay go’aanka mustaqbalka Lautaro Martinez
“Bale waa ka wanaagsan yahay Zidane, Figo iyo Ronaldo” - Savage